(trg)="2"> Septemba 1 , 2012
(trg)="4"> Naanị anyị ka ikike ibipụtaghachi ya dị n’aka .
(trg)="6"> ISIOKWU NDỊ BIDORO ỤLỌ NCHE A
(trg)="7"> 3 Nsogbu Ndị Ụmụ Nwaanyị Na - enwe
(trg)="8"> 4 Chineke Ò Ji Ụmụ Nwaanyị Kpọrọ Ihe ?
(trg)="9"> 8 Chineke Chọrọ Ka A Na - akwanyere Ụmụ Nwaanyị Ùgwù
(trg)="10"> ISIOKWU NDỊ NA - AGBAKARỊ N’ỤLỌ NCHE A
(trg)="11"> 16 Mụta Ihe n’Okwu Chineke ​ — Gịnị Ga - eme n’Ụbọchị Ikpe ?
(trg)="12"> 21 Bịaruo Chineke Nso ​ — “ Mba Niile Ga - amarakwa na Mụ Onwe M Bụ Jehova ”
(trg)="13"> 22 Ị̀ Maara ?
(trg)="14"> 23 Ndị Na - agụ Akwụkwọ Anyị Na - ajụ , Sị . . .
(trg)="15"> Ụmụ Nwaanyị Bụ́ Ndịàmà Jehova Hà Na - akụziri Ndị Mmadụ Baịbụl ?
(trg)="16"> 24 Akwụkwọ Ozi Si Gris
(trg)="17"> 30 Kụziere Ụmụ Gị Ihe ​ — Anyaukwu Kpataara Gehezaị Nsogbu
(trg)="18"> ISIOKWU NDỊ ỌZỌ DỊ N’ỤLỌ NCHE A
(trg)="19"> 12 Ugbu A Amatala M Chineke M Na - efe
(trg)="20"> 18 Obiọma Bụ Àgwà Dị Mkpa n’Anya Chineke
(trg)="21"> 26 E Meela Ka Ndị Mmadụ Mata Aha Chineke n’Asụsụ Swahili
(trg)="1"> Nsogbu Ndị Ụmụ Nwaanyị Na - enwe
(trg)="2"> “ Mgbe ọ bụla m hụrụ otú e si emegbu ụmụ nwaanyị torola eto , ọ na - adị m ka m ghara ito eto . ” ​ — IHE ZAHRA , BỤ́ NWA AGBỌGHỌ DỊ AFỌ IRI NA ISE , KWURU .
(trg)="3"> E dere ya na magazin aha ya bụ GEO , n’asụsụ French .
(trg)="4"> IHE nwa agbọghọ a foto ya dị n’aka nri kwuru na - egosi na asị a kpọrọ ụmụ nwaanyị na otú e si emegbu ha n’ebe niile n’ụwa na - ewute ụmụ nwaanyị niile , ma mgbe ha ka bụ nwata ma mgbe ha torola eto .
(trg)="5"> Ka anyị hụ ihe ụfọdụ a chọpụtarala banyere otú e si emegbu ụmụ nwaanyị .
(trg)="6"> ● Asị a kpọrọ ha .
(trg)="7"> N’Eshia , ọtụtụ ndị nne na nna na - achọ ka ha mụta ụmụ nwoke kama ịmụta ụmụ nwaanyị .
(trg)="8"> N’afọ 2011 , Òtù Mba Ụwa kwuru na n’Eshia , ihe dị ka otu narị nde ụmụ nwaanyị na nde iri atọ na anọ anwụọla .
(trg)="9"> E gburu ụfọdụ n’ime ha mgbe ha dị obere , ụfọdụ nwụrụ maka na e lekọtaghị ha nke ọma , ebe e sikwopụrụ ndị nke ọzọ n’afọ ime .
(trg)="10"> ● Agụmakwụkwọ .
(trg)="11"> N’ụwa niile , e kee ndị na - agụrughị klas nke anọ n’ụlọ akwụkwọ praịmarị ụzọ atọ , abụọ n’ime ha bụ ụmụ nwaanyị .
(trg)="12"> ● Idina nwaanyị n’ike .
(trg)="13"> Ihe karịrị ijeri ụmụ nwaanyị abụọ na nde isii bi ná mba ebe ndị a ka weere na nwoke idina nwunye ya n’ike abụghị ihe ọjọọ .
(trg)="14"> ● Ezigbo ụlọ ọgwụ adịghị .
(trg)="15"> Ná mba ndị na - emepe emepe , n’ihe dị ka nkeji abụọ ọ bụla , otu nwaanyị na - anwụ n’afọ ime ma ọ bụ mgbe ọ na - amụ nwa .
(trg)="16"> Ihe kpatara ya bụ na ezigbo ụlọ ọgwụ adịghị ná mba ndị ahụ .
(trg)="17"> ● Inwe ala ma ọ bụ ụlọ .
(trg)="18"> Ọ bụ eziokwu na ọ bụ ụmụ nwaanyị na - akọpụta ihe karịrị ọkara ihe oriri niile a na - eri n’ụwa , ma n’ọtụtụ mba , a naghị ekwe ka ha nwee ụlọ ma ọ bụ ka ha keta ala .
(trg)="19"> Gịnị mere na a naghị ekwe ka ụmụ nwaanyị nweta ihe ndị ruuru ha ?
(trg)="21"> Ihe ndị ahụ a na - akụzi na - eme ka ndị bi n’obodo ụfọdụ chee na imegbu ụmụ nwaanyị ma ọ bụ imeso ha ihe ike abụghị ihe ọjọọ .
(trg)="22"> Otu akwụkwọ akụkọ e dere n’asụsụ French kọrọ ihe otu nwaanyị India bụ́ ọkàiwu kwuru .
(trg)="23"> Aha ọkàiwu ahụ bụ Chandra Rami Chopra .
(trg)="24"> O dere , sị : “ E nwere otu ihe jikọrọ iwu ndị e nwere n’okpukpe niile dị n’ụwa .
(trg)="25"> Iwu ndị ahụ na - ekwu na asị a kpọrọ ụmụ nwaanyị kwesịrị ekwesị . ”
(trg)="26"> Ì chere na otú a e si emeso ụmụ nwaanyị dị mma ?
(trg)="27"> Ì chere na ihe e dere na Baịbụl na - egosi na e kwesịghị iji ụmụ nwaanyị kpọrọ ihe otú ọtụtụ akwụkwọ okpukpe ndị ọzọ kwuru ?
(trg)="28"> Ụfọdụ ndị chere na ihe e dere n’amaokwu ụfọdụ na Baịbụl na - egosi na e kwesịghị iji ụmụ nwaanyị kpọrọ ihe .
(trg)="29"> Ma olee otú Chineke , onye mere ka e dee Baịbụl , si ele ụmụ nwaanyị anya ?
(trg)="30"> Ọ bụ eziokwu na ọ ga - esiri ọtụtụ ndị ike ịgbanwe echiche ha n’okwu a , ma ọ bụrụ na anyị eleba anya nke ọma n’ihe Baịbụl kwuru banyere ụmụ nwaanyị , anyị ga - ahụ azịza nke ajụjụ ndị a .
(trg)="31"> [ Ebe E Si Nweta Ihe Osise 3 ]
(trg)="32"> © G.M.B .
(trg)="33"> Akash / Panos Pictures
(trg)="1"> Chineke Ò Ji Ụmụ Nwaanyị Kpọrọ Ihe ?
(trg)="2"> “ Ọ bụ nwaanyị kpatara mmehie , ọ bụkwa nwaanyị mere anyị niile ji anwụ anwụ . ” ​ — AKWỤKWỌ BỤ́ ECCLESIASTICUS , NKE E DERE N’IHE DỊ KA AFỌ 200 TUPU OGE NDỊ KRAỊST .
(trg)="3"> “ Ị bụ ngwá ọrụ Ekwensu : ọ bụ gị bụ onye mbụ riri mkpụrụ osisi a sịrị erila : ọ bụ gị bụ onye mbụ dara iwu Chineke . . .
(trg)="4"> Ọ bụ gị duhiere nwoke , onye bụ́ onyinyo Chineke . ” ​ — TETỌLIAN KWURU NKE A N’AKWỤKWỌ BỤ́ ON THE APPAREL OF WOMEN , NKE O DERE N’IHE DỊ KA AFỌ 200 OGE NDỊ KRAỊST .
(trg)="5"> IHE ndị a e dere n’akwụkwọ ndị ahụ esighị na Baịbụl .
(trg)="7"> Ụfọdụ ndị okpukpe ha na - agba ara n’oge a ka na - ekwu na otú ahụ e si emegbu ụmụ nwaanyị kwesịrị ekwesị n’ihi ihe ndị ha gụtara n’akwụkwọ okpukpe ha .
(trg)="8"> Ha na - ekwu na ọ bụ ụmụ nwaanyị kpatara ahụhụ niile ndị mmadụ na - ata n’ụwa a .
(trg)="9"> Ma , ọ̀ bụ eziokwu na Chineke chọrọ ka ụmụ nwoke na - emegbu ụmụ nwaanyị ?
(trg)="10"> Gịnị ka Baịbụl kwuru ?
(trg)="11"> Ka anyị hụ .
(trg)="12"> ▪ Chineke ọ̀ bụrụ ụmụ nwaanyị ọnụ ?
(trg)="13"> Mba .
(trg)="14"> Kama nke ahụ , ọ bụ “ agwọ mbụ ahụ , onye a na - akpọ Ekwensu , ” ka Chineke “ bụrụ ọnụ . ”
(trg)="15"> Mgbe Chineke kwuru na Adam ‘ ga - achị ’ nwunye ya , ihe ọ na - ekwu abụghị na ya chọrọ ka ụmụ nwoke na - achị ụmụ nwaanyị ọchịchị nchigbu .
(trg)="16"> Kama , ihe ọ na - ekwu bụ nsogbu mmehie Adam na Iv mere ga - akpatara ha .
(trg)="17"> N’ihi ya , ọ bụghị uche Chineke ka a na - emegbu ụmụ nwaanyị , kama ọ bụ mmehie ụmụ mmadụ kpatara ya .
(trg)="18"> Baịbụl ekwughị na ụmụ nwoke kwesịrị ịna - achị ụmụ nwaanyị ọchịchị nchigbu ka Chineke nwee ike ịgbaghara anyị mmehie ahụ Adam na Iv mere . — Ndị Rom 5 : 12 .
(trg)="19"> ▪ Chineke ò kere ụmụ nwaanyị ka ha dị ala karịa ụmụ nwoke ?
(trg)="20"> Mbanụ .
(trg)="21"> Jenesis 1 : 27 kwuru , sị : “ Chineke wee kee mmadụ n’onyinyo ya , ọ bụ n’onyinyo Chineke ka o kere ya ; nwoke na nwaanyị ka o kere ha . ”
(trg)="22"> Nke a pụtara na malite mgbe ahụ Chineke kere ụmụ mmadụ , ma nwoke ma nwaanyị , o kere ha ka ha na - akpa àgwà ka ya .
(trg)="23"> Ọ bụ eziokwu na ahụ́ Adam dị iche na nke Iv , otú o si eche echiche adịtụkwa iche na nke Iv , Chineke nyere ha abụọ otu ọrụ , ha abụọ hàkwa n’anya ya . — Jenesis 1 : 28 - 31 .
(trg)="24"> Tupu Chineke ekee Iv , Chineke kwuru , sị : “ M gaje imere [ Adam ] onye inyeaka , ka ọ bụrụ onye ga - eme ka o zuo ezu . ”
(trg)="25"> Ma okwu ahụ bụ́ ‘ onye ga - eme ka Adam zuo ezu ’ ọ̀ pụtara na nwaanyị ahụ ga - adị ala karịa nwoke ?
(trg)="26"> Mba .
(trg)="27"> Chegodị echiche otú onye nọ n’ụgbọ mmiri na - akụ azụ̀ na onye na - akwọ ụgbọ mmiri ahụ si arụkọ ọrụ ?
(trg)="28"> Otu onye ọ̀ ga na - egbu azụ̀ ma na - akwọ ụgbọ mmiri n’otu mgbe ?
(trg)="29"> Mba .
(trg)="30"> Ọ bụ eziokwu na ọ bụ onye ahụ na - akụ azụ̀ na - egbute azụ̀ , ma nke a ọ̀ pụtara na ọrụ ya dị mkpa karịa nke onye ahụ na - akwọ ụgbọ ahụ ?
(trg)="31"> Ọ pụtaghị otú ahụ .
(trg)="32"> Otú ahụ ka ọ dịkwa nwoke na nwaanyị .
(trg)="33"> Chineke kere ha ka ha na - arụkọ ọrụ ọnụ , ọ bụghị ka ha na - amarịta aka . — Jenesis 2 : 24 .
(trg)="34"> ▪ Olee ihe na - egosi na Chineke ji ụmụ nwaanyị kpọrọ ihe ?
(trg)="35"> Ebe ọ bụ na Chineke maara ihe ụmụ nwoke na - ezughị okè nwere ike ime , o nyere iwu ndị ga - eme ka a ghara imegbu ụmụ nwaanyị .
(trg)="36"> Otu nwaanyị aha ya bụ Laure Aynard dere banyere iwu ahụ Chineke nyere ndị Izrel n’otu akwụkwọ o dere .
(trg)="37"> Nwaanyị a dere , sị : “ Ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ na mgbe ọ bụla Iwu Mozis kwuru banyere ụmụ nwaanyị , ihe ọ na - ekwu bụ ihe ga - eme ka a ghara imegbu ụmụ nwaanyị . ”
(trg)="38"> Dị ka ihe atụ , Iwu ahụ kwuru ka mmadụ na - asọpụrụ ma nna ya ma nne ya .
(trg)="39"> Iwu ahụ kwukwara ka a ghara imeso nwaanyị dị ime ihe ike .
(trg)="40"> O doro anya na ihe e kwuru n’iwu ndị ahụ Chineke nyere dịkwa iche ma e were ya tụnyere otú e si anapụ ụmụ nwaanyị ihe ndị ruuru ha n’ọtụtụ ebe n’oge anyị a .
(trg)="41"> Ma e nwekwara ihe ndị ọzọ na - egosi na Chineke ji ụmụ nwaanyị kpọrọ ihe .